Usebenzisa I-Social Media Ukukhulisa Umcimbi Wakho Olandelayo | Martech Zone
Usebenzisa I-Social Media Ukukhulisa Umcimbi Wakho Olandelayo
ULwesithathu, April 11, 2012 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 U-Eric Olson
Uma kuziwa ezokuxhumana kanye nokumaketha imicimbi, isifundo sithi: qala ukuyisebenzisa MANJE - kodwa qiniseka ukuthi uyalalela ngaphambi kokugxuma Abasebenzisi bezokuxhumana badlula abasebenzisi be-imeyili emhlabeni jikelele eminyakeni emithathu edlule futhi amanethiwekhi omphakathi akhonjelwa kuphela ukuthi aqhubeke nokukhula. Cabanga ngemithombo yezokuxhumana njengesiteshi sokuxhumana esidlula ithuluzi lokukhangisa noma ukufaka esikhundleni sokukhangisa. Amapulatifomu okuxhumana okukodwa kuya kokuningi awasebenzi kahle. Ngakho-ke impumelelo ezweni lanamuhla ledijithali idinga ukuthi abahleli bemicimbi badedele kancane futhi benze lula ukuxhumana "kwabaningi kwabaningi".
Ngaphambi kokuvala le thebhu ukuvuselela i-akhawunti yakho ye-Twitter, ake sibuyekeze izinyathelo ezine zokusebenzisa uhlelo lwezokuxhumana oluyimpumelelo ngomcimbi wakho.
Khomba - Isinyathelo sokuqala ukwazi izilaleli zakho ozifunayo. Thola umphakathi osuvele uku-inthanethi futhi onakekela imbangela yakho. Lokhu kungenziwa ngezindlela ezahlukahlukene noma ngabe kungukucwaninga kwabahambele, ukusingathwa kwezingxoxo ze-twitter, noma ukuqala iqembu ku-LinkedIn. Noma ngabe iyiphi indlela okhetha ngayo, kubalulekile ukubuka le-sub-network njengeqembu labangaba amanxusa emikhiqizo, ngakho-ke qiniseka ukuthi ubaphatha ngenhlonipho online.
Lalela - Inhlonipho eku-inthanethi ifana nenhlonipho yephathi, ubungeke nje usondele eqenjini labantu bese uqala ukubamemeza nge-ajenda yakho. Kubalulekile ukuthi ulalele kuqala, uqonde izintshisekelo zabo, bese ukhombisa ukuthi ulalele ngokuvumelanisa okuqukethwe komcimbi wakho ukuze kufane nezidingo nezidingo zesizinda sakho sababekhona. Ukwabelana ngokuqukethwe ukudala i-buzz nokuxoxa phakathi komcimbi wakho kusebenza kuphela uma izethameli zakho zinesifiso, ngakho-ke lalela njalo ngaphambi kokuthumela.
Plan - Lesi isinyathelo esinezingxenye ezimbili ezibandakanya okuqukethwe neplatifomu.
Okuqukethwe: Njalo qondanisa amasu ezokuxhumana nabantu ngezinhloso zekota noma zonyaka Ukuba nesethi ecacile yezinhloso ozobeka kuyo imephu kuzokusiza ukukala imizamo yakho ngempumelelo futhi kuthuthukise ukuzibandakanya kwakho. Uhlelo luzophinda futhi lunikeze isithombe esicacile sesizathu sakho sesikhathi eside sokubandakanya ababekhona emcimbini unyaka wonke nokuqukethwe ukwenza lokho.
Ipulatifomu: Uma usuvele unohlelo lokuqukethwe olusendaweni, qiniseka ukuthi unepulatifomu ebekelwe abantu abangazibandakanya kuyo. Kunamapulatifomu amahhala njenge-LinkedIn noma i-Twitter kepha kukhona nezithangami ezikhokhelwayo ezinjengezinto eziqukethe zona, imiphakathi ephikelelayo noma izingosi zenhlalo ezigxile emcimbini ukuze zingenise futhi zihlanganise imisebenzi evela kumanethiwekhi ahlukahlukene wezenhlalo nokuyihlanganisa nezintshisekelo eziveziwe nolwazi oluvela kulo mcimbi .
Yekela - Iqiniso elinzima ukuthi ababekhona manje sebethembe ontanga yabo ukwedlula indlela abathemba ngayo inhlangano yakho. Yamukela ukuthi ukwehluleka ukulawula izingxoxo zomcimbi kuyinto enhle. Ngaphambi, esizeni, kanye nokuthumela izingxoxo zomcimbi kuma-social media kuhloselwe ukuba kube ukuzibandakanya komphakathi okuphambene nokulawulwa kanye nefomula. Inhloso yakho kufanele kube ukudala amanxusa ashiseka ngokweqile ngenhlangano yakho, bese ubahlomisa ngezinto ofuna bazihlanganyele nazo. Ngemuva kwalokho, banikeze inkululeko yokwazisa inethiwekhi. Lokhu kusho ukuthi kufanele uthathe isiqiniseko esengeziwe sokuqinisekisa ukuthi konke okuqukethwe okuhambisa kumalungu omphakathi wezokuxhumana kungatholwa kahle kuphela. Uma kwenziwe kahle, leli butho labavangeli lingashayela abantu abeze kakhulu kunanoma isiphi isikhangiso.
Imicimbi ingeyenhlalo ngokwemvelo, ithuba lokuxhumana nabantu abanomqondo ofanayo futhi nixoxe ngezihloko ezinentshisekelo, njengemithombo yezokuxhumana, okwenza kube ukunwetshwa okuhle kwemvelo komcimbi. Landela lezi zinyathelo futhi ungakha kalula umphakathi ohlanganyele ezungeze imicimbi yakho naseduze nenhlangano yakho. Ngenxa yalokho, umthelela wemicimbi yakho uzogobhoza udlule izindonga zamakamelo okuhlangana futhi umphumela oholele kumathemba anentshisekelo uzongena ezihlalweni zomcimbi wakho olandelayo.
Tags: ukukhuthaza umcimbiUkwazisa ngomcimbi wokumakethaukukhushulwa komphakathi
U-Eric Olson ungumphathi jikelele weSMB Events e Inethiwekhi esebenzayo, Izixazululo Zebhizinisi. Unesibopho sokushayela isu lomhlaba wonke kanye ne-P & L yezixazululo zemicimbi yenkampani yebhizinisi kuya kwezebhizinisi esebenzela amabhizinisi amancane, aphakathi nendawo, izinhlangano kanye nezinkampani ezidayisa izinkampani nezangaphandle. Uphumelele e-Colorado State University futhi uyasebenza ngokushushuluza nokubamba iqhaza kuma-triathlons.
Ukwenza Imali Ngephepha Le-imeyili: Izinketho Ezimbili Ezingasebenza Zama-Blogger Nabamemezeli Abancane